Indlela yoPhuhliso-Sichuan Shuer Medical Devices Co, Ltd.
Kwi-2007, iinkampani zokuqala zokuseka
IShaoxing yeying fanghua co.,LTD yasekwa!Ekuqaleni kokusekwa, isicwangciso sophuhliso esizimeleyo kunye nokusekwa kweempawu zesizwe.
Ngo-2010, lo mzi-mveliso wangenelela
kunyaka wophuhliso olukhawulezayo, umzi-mveliso wandiswa kwaye isikali sandiswa ngakumbi.
Ngo-2014, iNdalo eqhubekayo
I-Shaoxing Juneng New Material Technology Co.LTD.yasekwa, kwaye ezinye zenkqubo yangaphandle yajika yaba luphando oluzimeleyo kunye nokuveliswa kophuhliso, kwaye yaphuhlisa ishishini lokuthumela ngaphandle, yaba sisiseko seyunivesithi yaseshaoxing.
Ngo-2017, ugqibile impumelelo ethile
Sichuan juneng filter co.ltd.-ixesha elitsha, ukucinga okutsha kunye nesiqalo esitsha, siye satyhoboza kwiNombolo 1, kwaye sibe ngomnye wabaphathi abaphambili bale fayile. kwaye inkampani yethu iqhubela phambili kwi-lPO phantse.
ln 2018, uphuhliso oluzinzileyo
Yamkelwa nguShifeng, Youbang, Guijun, Tai Ji, Xinxiwang kunye nezinye iinkampani, baye baba ngamaqabane ethu exesha elide kwaye baseka indawo yethu ekhokelayo kwizinto zokucoca ezinyibilikayo.
Ngo-2020, Phulaphula ikamva
Siye saba ngumboneleli ochongiweyo weyunithi enxulumene nezixhobo zonyango, kwaye sibandakanyiwe kuluhlu lwezinto eziphambili zothintelo lwesifo sobhubhane kuzwelonke amashishini aqinisekisayo, akhokhelela kushishino lwempahla olunyibilikayo.
Iimveliso ezishushu - Imephu yesiza - AMP Mobile Imaski yaseTshayina, Imaski ekhuselayo yaseTshayina, Imaski yobuso, Pharmacy Surgical Mask, Imaski yePPE, FFP2 Isiphefumlo,